8 codsi oo bilaash ah si aad uga daawato moobilkaaga kombuyutarkaaga | Androidsis
8 codsi oo bilaash ah si aad uga daawato moobilkaaga kombuyuutarkaaga
Isticmaalayaal badan, ka eeg mobilka kombuyuutarka wuxuu u oggolaanayaa iyaga inay kordhiyaan waxsoosaarka, gaar ahaan markay timaado shaqada. Si kastaba ha noqotee, kuwa kale oo badan, waa hab lagu adeegsado barnaamijyada laga heli karo oo keliya moobiilkeena, sida WhatsApp, si raaxo leh kombiyuutarkayaga.
Maaddaama tikniyoolajiyaddu horumarsan tahay, adeegsadayaashu waxay noqdeen kuwa aad ugu tiirsan casriga, maadaama tani ay noo ogolaaneyso inaan sameyno ficil kasta oo aan u baahanahay, laga bilaabo sawir qaadista, duubista fiidiyoowga, dirista emaylka, hubinta xisaabaadka bangiga, sameynta wicitaano fiidiyoow ah ... iyo sidoo kale wicitaano (si cad)
Markii aan la macaamileyno taleefannadeenna casriga ah, waa inaan tixgelinno nooca adeegsiga aan dooneyno inaan qabanno: adeegsiga barnaamijyada oo aan ku soo bandhigno shaashadda ama maamulno waxyaabaha laga heli karo gudaha, maadaama dhammaan codsiyada noo oggolaan maayaan inaan qabanno labada hawlood.
6 Telefoonkaaga Microsoft
Magacan ku dhowaad aan la shaacin karin, waxaan haynaa codsi furan oo furan oo noo ogolaanaya inaan ku soo bandhigno shaashadda taleefanka casriga ah PC Windows, Linux, iyo xitaa macOS.
Si ka duwan barnaamijyada kale ee noo oggolaanaya inaan la falgalno waxyaabaha ku jira shaashadda, oo leh scrcpy kaliya waxay muujineysaa waxa laga arko shaashadda, ma isticmaali karno codsiyada aan rakibnay qalabka mobilada
Codsigan ayaa ku habboon haddii aad rabto inaad ka duubo shaashadda taleefankaaga casriga ah kombiyuutarka adigoon ku rakibin wax codsi ah taleefanka casriga ah. Kaliya laakiin waa inaan isticmaalno Android Debug Bridge (ADB) codsi aan awoodno ka soo xiriir this link.
Waxaan sidoo kale ku qasbanaaneynaa inaan kicino USB Debugging, horeyna u furayno xulashooyinka horumariyaha. Ugu dambeyntii, waa inaan rakibnaa app this adoo raacaya tilmaamaha faahfaahsan. Xiriirka sameeyo silig la'aan, markaa labada aalad waa in lagu xidhaa isla shabakada Wi-Fi.
Thanks to AllCast, waxaan ku milicsan karnaa qalabkeena kombuyuutarka adoo adeegsanaya biraawsar shaashadda taleefanka casriga ah. Haddii aan sidoo kale dooneyno inaan duubno shaashadda, waa inaan sameynaa ka soo dejiso arjiga degelkeeda.
AllCast nooma ogola in aan ka xakameyno qalabka kombuyuutarka sida haddii ay noo ogolaadaan in aan sameyno codsiyo kale, laakiin haddii ujeedku yahay in lagu eego waxyaabaha ku jira shaashad ballaaran, doorashadan gabi ahaanba waa bilaash Way ka badan tahay intaas.
Haddii aan ka hadalno suurtagalnimada in mobilka lagu arko kombuyuutarka, ha ahaado Windows, Linux ama macOS, waa inaan ka hadalno mid ka mid ah codsiyada ugu ruug-caddaa badan suuqa: AirDroid. Si ka duwan xalalka kale, marka lagu xirayo taleefankeena casriga ah kombiyuutarka, waxay muujineysaa muuqaalkeeda gaarka ah ee aan wax xiriir ah la lahayn lakabka shakhsiyeynta casriga ah.
Si kastaba ha noqotee, haddii ay noo ogolaato inaan la galno mid kasta oo ka mid ah barnaamijyada aan ku rakibnay kombuyuutarka, markaa haddii aan rabno inaan adeegsanno WhatsApp ama barnaamijyada kale ee waxaa loo heli karaa oo keliya taleefanka casriga ah, waxaan ku sameyn karnaa barnaamijkan.
Isgaarsiinta waxaa lagu fuliyaa a wireless iyada oo loo marayo casriga IP, sidaa darteed labada aalad waa inay ku xirnaadaan isla shabakada Wi-Fi.
Looma baahna in la rakibo codsi kasta kumbuyuutarka, tan iyo markii marin laga helayo biraawsar kasta, galaya IP-ga casriga ah ee barnaamijka AirDroid na tusayo mar aan ku rakibnay qalabka.
Mobizen waa codsi sidoo kale noo oggolaanaya inaan ku aragno moobilkeena kombuyuutarka, hase yeeshee, shaqadeeda ugu weyni waa duub shaashadda taleefanka casriga ah. Si tan loo sameeyo, waa inaan ku rakibnaa codsi labadaba qalabkeenna moobiilka iyo Windows PC-ka (ma jiro nooc loogu talagalay nidaamyada kale ee hawlgalka).
Marka lagu daro daawashada shaashadda kombuyuutarkayaga, waxaan sidoo kale maareyn karnaa dhammaan waxyaabaha ku keydsan taleefannada casriga ah. Waxay u shaqeysaa si xarrago leh IP-ga, sida AirDroid oo kale. In ka badan 3 milyan oo isticmaale iyo qiimeyn celcelis ahaan ah 4,3 xiddigood ansaxiyo codsigan gebi ahaanba bilaashka ah.
Mobizen taariikhqorihii Screen
Codsi noo oggolaanaya inaan ku aragno moobilka kombuyuutarka, oo aan lahayn wax buuxiye ah oo waliba la jaan qaadi kara Windows, macOS, Linux iyo biraawsar kasta waa Vysor, oo ah codsi gebi ahaanba bilaash ah oo noo ogolaanaya inaan ku xirno taleefankeena casriga ah kombiyuutarka adoo adeegsanaya xarig, sidaa darteed wax dib u dhac ahi haba yaraatee ma jiraan in haddii aan ka heli karno isku xirnaanta Wi-Fi.
Si loo adeegsado codsigan, waxaa lagama maarmaan ah in aan kudhaqaajino khaladka USB iyada oo loo marayo xulashooyinka horumariyaha. Hal mar ku xiriiray taleefanka casriga ah USB kumbuyuutarka, waxaan u fureynaa arjiga oo aan gujineynaa badhanka Muuqaalka.
Vysor - Xakamaynta Android ee kombuyuutarka
Mid ka mid ah barnaamijyada ugu wanaagsan ee hadda laga heli karo suuqa si aad uga daawato shaashadda taleefankayaga casriga ah kombuyuutarkayaga, la falgalkiisa iyo waliba helitaanka dhammaan waxyaabaha uu ka kooban yahay waa taleefankaaga Microsoft, oo ah codsi gacan-ka-hadal kula jira taleefanka gacanta ee Samsung, ugu yaraan xiriir la leh ka eeg shaashadda kombuyuutarkayaga.
Haddii aan haysanno taleefannada casriga ah ee Samsung, waxaan u isticmaali karnaa barnaamijkaaga Microsoft Telefoonkaaga si aan qalabka uga wada xakameyno kombiyuutarkayaga, kaasoo wuxuu noo ogolaanayaa inaan furno codsiyada ku rakiban telefoonka oo la falgalaan iyaga oo aan jir ahaan taaban taleefanka casriga ah.
Haddii aad haysato mid ka mid ah taleefannada casriga ah ee Samsung, ama moodooyinka dambe, ee aan hoos ku faahfaahin doono, waad isticmaali kartaa shaqadan:
Galaxy S9 iyo Xusuusin 9
Galaxy S10 iyo Xusuusin 10
Galaxy S20 iyo Xusuusin 20
Galaxy Z Fold iyo Z Flip
Kaliya waa inaan rakibnaa barnaamijka Saaxiibkaaga Taleefankaaga ah (badanaa waxaa lagu rakibay asal ahaan), fur barnaamijyada dalabka Telefoonkaaga Windows oo isku xidha labada aalad.
Haddii aadan haysan taleefannada casriga ee Samsung waxaad u isticmaali kartaa codsigan marin u hel waxyaabaha ku jira taleefanka casriga ahHa noqoto fariimo, sawirro, fiidiyowyo iyo xitaa wicitaanno taleefan.
Xal aad u xiiso badan markay timaado ka tarjumida shaashadda shaashadda casriga ah ee ku jirta PC, Windows ama macOS, waa 5KPlayer, codsi gabi ahaanba waa bilaash in Uma baahna ku rakibida wax software ah qalabka mobilada.
Codsigan sidoo kale waa fiidiyoow fiidiyoow ah, oo la jaan qaada dhammaan noocyada ugu isticmaalka badan maanta, oo ay ku jiraan MKV. Waxay sidoo kale noo ogolaaneysaa iswaafajinta DLNA, waxay si silig la'aan ah ugu shaqeysaa shabakadda Wi-Fi iyo, sida haddii aysan intaas ku filnayn, waxay kaloo noo oggolaaneysaa inaan ka soo dejino fiidiyowyo YouTube, Dailymotion, Vimeo ...
Haddii waxa aad u baahan tahay ay tahay xasillooni iyo kalsooni marka aad ka eegayso moobilkaaga kombiyuutarka, iyadoon loo eegin soo saaraha, mid ka mid ah xalka ugu fiican ee lacag bixinta ayaa laga helayaa arjiga AirServer, codsi aan nooga baahnayn inaan ku rakibno wax barnaamij ah taleefanka casriga ah, Kaliya waa inaad ku rakib codsi kombuyuutarka Dukaanka Microsoft iyo Mac-ka laga helo Mac App Store.
Codsigan wuxuu noo ogolaanayaa inaan nuqul ka sameysano shaashadda shaashadda casriga ah ee kumbuyuutarka, taas oo ka dhigaysa codsi ku habboon in lagu duubo cayaarahayaga, lagu sameeyo casharro, ka eeg waxyaabaha ku jira taleefannadeenna casriga shaashad weyn...
In kastoo dalabka waa la bixiyaa, waxaan u isticmaali karnaa 30 maalmood gebi ahaanba bilaash, in ka badan waqti ku filan si aan u qiimeyno inay runti mudan tahay in la bixiyo. Haddii aad u baahato inaad adeegsato shaqadan marar badan, ku dhowaad 40 euro oo ah qiimaheeda, waxaad si dhakhso leh ugu bixin doontaa waqtiga aad keydsato.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » 8 codsi oo bilaash ah si aad uga daawato moobilkaaga kombuyuutarkaaga
10ka Taleefan ee ugu sareeya waxqabadka Abriil 2021